forward mail နဲ့ေ၇ာက်လာတဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » forward mail နဲ့ေ၇ာက်လာတဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်
forward mail နဲ့ေ၇ာက်လာတဲ့မင်းသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်
Posted by Shwemannmay on Jul 15, 2010 in News | 23 comments
မင်းသမီးတွေ အမှုဇြစ်နေကြတဲ့ခေတ်မှာ မင်းသမီး ပန်းဖြူ ရဲ့အမှု့အကြောင်း သတင်းကြားပြီးပြီလား။ သူ့အပေါ်ယုတ်မာ ရက်စက်မိုက်ရိုင်းသွားတဲ့ ကိုဇော်ဝင်းရှိန် ဆိုတဲ့သူကို ပြစ်မှု့ပုဒ်မ ၄၁၇ နဲ့ တရားစွဲထားတာတဲ့လေ။ ဇော်ဝင်းရှိန် ဆိုတာသိလား ?။ ဟိုတစ်လောက DVB မှာ ပေါ်ပြူလာဖြစ်တဲ့၊ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းပေါ် က နံမည်၈လုံးနဲ့လူကြီးသား နဲ့ ရှယ်ယာစပ်တူဖွင့်ပြီး၊ ကမန်းကတန်း ပြန်ဖျက်လိုက်တဲ့၊7LEKKER COFFEE SHOP ပိုင်ရှင်၊ DELTA UNITED ဘောလုံးအသင်း ရဲ့ ဥက္ကဌ ဟောင်း ၊ဧရာဟင်္သာ ကုမ္ပဏီ ပိုင်ရှင်ဆိုတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့ ၂၀၀၂ ခုမှာ စတင်ပြီး ချစ်သူတွေ ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်တဲ့။ ၂၀၀၃ ခုနှစ်ထဲလည်းရောက်ရော ဇော်ဝင်းရှိန်ရဲ့ လက်ထပ်ကြမယ် ဆိုတဲ့ စကားကို ယုံကြည်ပြီး အတူအိပ်ဖြစ်ကြရောတဲ့။ အဒီအချိန်တုန်းက ဇော်ဝင်းရှိန်က လမ်း ၂၀၊ အမှတ် ၁၂၃ ဆိုတဲ့ တိုက်ခန်းကျဉ်းကျဉ်း စုတ်စုတ်လေးထဲမှာ မောင်နှမတွေ အများကြီးနဲ့ တိုးဝှေ့နေရတာ။အဲဒီတော့ ပန်းဖြူနဲ့ဇော်ဝင်းရှိန်တို့ဟာ နှစ်ယောက်အတူအမြန်နေရဖို့၊ ပိုက်ဆံစုကြတယ်တဲ့။ သိပ်တောင်မကြာလိုက်ပါဘူး။ဇော်ဝင်းရှိန် ချမ်းသာလာတယ်တဲ့။ပိုက်ဆံတွေအများကြီးစုမိလာ တယ်တဲ့။ဘယ်လိုကြောင့် ချမ်းသာလာသလဲဆိုရင် ဇော်ဝင်းရှိန်က တရားမ၀င်တဲ့ တင်သွင်းမှုတွေ၊ ဥပဒေနဲ့မလွတ်ကင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုနယ်စပ်ကနေခိုးသွင်းလာတာရယ်၊သူ့အဖေဦးသန်းစိန်ကဟင်္သာတမြို့ မှာရှိတဲ့ ရွာလေးတစ်ရွာက ရိုးသားတဲ့သူတွေဆီက ရွှေတွေကို ကလိမ်ကကျစ် လိမ်ယူပြီး၊ ရန်ကုန်မှာ ရှောင်ပုန်းရင်း ကြာဆံစက်တွေလုပ်တာကြောင့်တဲ့။ တို့ မြန်မာလူမျိုးတွေက အရာရာကို ခွင့်လွတ်စိတ်၊ သူ့အကုသိုလ်သူ ခံလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ စိတ်တွေနဲ့တရားမစွဲခဲ့ကြဘူးပေါ့။ ဇော်ဝင်းရှိန်တို့က မြန်မာတွေမဟုတ်ဘူး။ တရုတ်ပြည် ၊ ဖုကျန့်ပြည်နယ်ကနေ သူ့မိဘတွေကို လိမ်လည်မှုနဲ့ လိုက်ဖမ်းလို့ မြန်မာပြည်ထဲဝင်ပြီးပြေးပုန်းနေတဲ့ တရုတ်တွေ။ အဲဒီတော့ လုပ်ရဲကိုင်ရဲနဲ့ ငရဲမကြောက်တာ မဆန်းဘူးပေါ့။ နောက်တော့ဇော်ဝင်းရှိန်ဟာ မြန်မာပြည်ရဲ့ အချမ်းသာဆုံး (၁၀)ဦး စာရင်းဝင် ဖြစ်သွားရော။ ဒီတခါကြီးပွားပုံကတော့ နည်းနည်းဆန်းတယ် ပြောရမလားပဲ။ မြန်မာပြည်က အခွင့်အာဏာရှိတဲ့ လူကြီးတွေဆီကို လက်ဆောင်ပဏ္ဍာတွေပေး၊ လူကြီးတွေသွားမဲ့ လမ်းကြောင်းတွေမှာ သူကကြိုရောက်ပြီး ရေ၊မီးအစုံ စီစဉ်ပေးတယ်တဲ့။ တစ်လောက နာမည်ရှစ်လုံးနဲ့အာဏာရှိတဲ့လူကြီး စင်ကာပူမှာဆေးသွားကုတော့ လေဆိပ်မှာ မက်စ်အချိုရည်ပိုင်ရှင် ဦးဇော်ဇော်နဲ့ ဇော်ဝင်းရှိန်တို့ဟာ နာမည်ရှစ်လုံးနဲ့ လူကြီးရဲ့ အ၀တ်ထုတ်ကို သူဆွဲမယ်၊ ငါဆွဲမယ်နဲ့ လုဆွဲနေကြတာ ဣနြေ္ဒပျက်လွန်းလို့ စင်ကာပူလေဆိပ်မှာတွေ့လိုက်ရတဲ့ ဗမာတွေခင်မျာ သူတို့ကိုအင်မတန်လိမ်မာပြီး၊ လူကြီးရိုသေလိုက် ကြတာလို့သာဓုခေါ်မယ်မှမကြံသေးဘူး၊ ဇော်ဝင်းရှိန်ဆိုတဲ့လူက သူ့မိခင်ကို လူရှေ့သူရှေ့မှာတောင် ဆဲဆိုနေကြပဲဆိုတာ သိလိုက်ရပြန်ရော (ကိုယ်မိခင်ကို ခုနလူကြီးတွေရဲ့ (၁၀)ပုံ(၁)ပုံပဲ ကောင်းပါဦး လားနော်)။ သူပိုင်တဲ့ ဧရာဟင်္သာကုမ္ပဏီမှာဆိုရင်လည်း ခုနကလူကြီးသားတွေ၊ ၀န်ကြီးသားတွေ၊ရန်ကုန်တိုင်း အတွင်းရေးမှူးရဲ့သားတွေကို ရှယ်ယာတွေ အလကားပေး၊(တစ်ခုခုတော့ ပြန်ရမှာပေါ့လေ)၊ ဒါရိုက်တာ နေရာတွေပေးနဲ့ပေါ့။ ကုမ္ပဏီကို စာရင်းစစ်တွေလာစစ်တော့မယ့် သတင်းကြားရင် ကုမ္ပဏီရဲ့ကွန်ပျူတာ တွေကို ဟက်ဒစ်တွေ အလုံးလိုက်ချိန်းပစ်လိုက်ရောတဲ့။ ဆေးရုံတွေဆောက်၊ ဈေးတွေဆောက်နဲ့ ဟော အခုလဲ ဟင်္သာတမြို့မှာ ရှော့ပင်းစင်တာပါတဲ့ ကားအဝေးပြေးကွင်းဆောက်မလို့တဲ့။ သိန်းပေါင်း သုံးသောင်းကျော်တန် ဆိုပဲ။ တကယ်တော့ အဲဒီမြေနေရာတွေဟာ လယ်သမားတွေဆီက လယ်ယာမြေ တွေကို အခွင့်အာဏာရှိတဲ့ ခုနက ပုဂ္ဂိုလ်တွေ တိုင်းမှူးတွေရဲ့ အာဏာကိုယူသုံးပြီး၊ မတန်တဆဈေးနှိမ်လို့ ၀ယ်ထားတာတွေလေ။ ရိုးသားတဲ့ တောသူတောင်သားတွေဟာ မျက်ရည်စက်လက်နဲ့ကြည့်နေရ တော့တယ်တဲ့။ ပန်းဖြူကတော့ ဒီအကြောင်းတွေကို အစက မသိခဲ့ဘူးလေ။ ရိုးသားတဲ့ ဖိုးသခွားလို့ပဲထင် ခဲ့တာ။ ပိုက်ဆံအဆင်ပြေလို့ လက်ထပ်မယ်လည်းဆိုရော ဇော်ဝင်းရှိန်က မယူနိုင်ဘူးဖြစ်ရော။ သူငယ်ချင်း အပေါင်းအသင်းတွေက အဲဒီကျမှ ဖွင့်ပြောလို့ အကြောင်းစုံကို သိလိုက်ရတယ်တဲ့။ အဆင်မပြေခင်တုန်း ကတော့ ပန်းဖြူဆီကနေ ဇော်ဝင်းရှိန် ကလူကိုတင်မဟုတ်ဘူး ။ ယူသွားတာတွေ ရှိသေးတယ်တဲ့။ (ချူစားတာနေမှာပေါ့)။ စီးပွားရေးအဆင်ပြေသွားတော့၊ကန်ထုတ်ပြီလေ။ အစောပိုင်းတုန်းကပန်းဖြူ ကလည်း သည်းခံပါတယ်။ဖူးစာမပါလို့မပေါင်းရဘူးလို့ မှတ်တယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် သည်းခံခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့ သူတွေ ကို ခေါင်းပေါ်တတ်နင်းနေတာဟာဇော်ဝင်းရှိန်ရဲ့ ထုံးစံဖြစ်နေပြီဆိုတော့၊ ပန်းဖြူကို ယုတ်မာ ရိုင်းစိုင်းတဲ့စကားတွေနဲ့ကျေးဇူးတွေကိုမေ့၊ ပါးစပ်အရသာခံပြီး၊ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမဟုတ်တာတွေ ပြောပါရောလား။ ဒါကိုပန်းဖြူ ပြန်ကြားတော့၊ ဖုန်းဆက်ပြီး၊ဆက်မပြောဖို့၊ ရပ်ဖို့ပြောတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် သကောင့်သား က မရပ်ဘဲ၊ ပို ပိုဆိုးပြီးပြောတော့၊ပန်းဖြူက သည်းမခံနိုင်တဲ့အဆုံး၊ ဆက်ပြီး မိုက်ရိုင်းတဲ့ အပြုအမှူတွေ၊ အပြောအဆိုတွေ ထပ်လုပ်နေမယ်ဆိုရင် တရားစွဲတော့မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့။ သူတို့လိုငွေရှင်၊ ဓနရှင်တွေကပြောရင်၊ သူ့တို့ပတ်ဝန်းကျင်က လက်ခံယုံကြည်ကြတာမို့လို့တဲ့လေ။ အဲဒီမှာ ဇော်ဝင်းရှိန် ကဘာပြန်ပြောသလဲ ဆိုရင်၊ တရားစွဲချင်လည်းစွဲပေါ့တဲ့။ငါကတော့ဂရု မစိုက်ဘူးတဲ့။ ငါ့မှာ ကူညီပေးမယ့် အာဏာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂါလ်တွေ အများကြီးရှိတယ်။ပါးပါးမလုပ်နဲ့၊ထူထူလုပ်။ ငါပိုင်တဲ့ လူကြီးတွေက ပေါ့သေးသေးမဟုတ်ဘူးတဲ့။ အဲဒီတော့ ပန်းဖြူ ကပြန်ပြောတယ်။ အမှန်တရားကို ဘယ်သူ့မှ မျက်ကွယ်ပြုလို့ မရဘူး။ အမှားကိုအမှန်လုပ်လို့ မရဘူး။တရားဥပဒေဆိုတာရှိတယ် ဆိုပြီး ပြန်ပြောလိုက်တယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ပန်းဖြူခမျာ သူ့ထင်မြင်ချက်တွေလွဲမှားတယ် ဆိုတာ တကယ် တရား ရင်ဆိုင်ရတော့မှသိသွားရတယ်လေ။ တရားဥပဒေအပေါ်မှာ အာဏာရှိတဲ့ ပုဂ္ဂါလ်တွေအများကြီးတတ်ထိုင် နေကြတာဘဲလေ။ ဇော်ဝင်းရှိန် ဘက်ကပန်းဖြူနဲ့ ကာမလည်းမဆက်ဆံဖူးဘူး။ ရည်းစားလည်း မဟုတ်ဘူး။ ဘယ်တုန်းကမှ ဘယ်လိုအကြောင်းနဲ့မှမပတ်သတ်ဖူးဘူးလို့ငြင်းတယ်လေ။ နောက်တော့မြို့နယ် တရားသူကြီးက ပန်းဖြူ ကိုသူ့ရုံးခန်းထဲ ခေါ်ပြောတယ်တဲ့။ နစ်နာကြေးဆိုပြီးတောင်းပြီး၊ ကျေအေးလိုက်ပါလားတဲ့။အမှု့ကို စစ်ကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ၊ ပန်းဖြူဘက် ကမှန်ကန်တယ်။ သက်သေ ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာ သိတယ်တဲ့။ဒါပေမယ့် သူတို့မှာမလွန်ဆန် နိုင်တဲ့ ဖိအားတွေရှိတယ်တဲ့။ သူတို့ ရာထူးလေး ပြုတ်သွားမှာစိုးလို့၊ အမှန်တရားဘက်ကနေ ရပ်တည်မပေးနိုင်တဲ့အတွက်စိတ်မ ကောင်း ဖြစ်ရတယ်တဲ့။ ပန်းဖြူ ကပြန်ပြောလိုက်တယ်၊ ပိုက်ဆံလိုချင်လို့စွဲတာမဟုတ်ဘူး၊ ဥပဒေမဲ့စိတ်ထင်တိုင်း ယုတ်မာနေတဲ့ သူတစ်ယောက်ကိုတရားဥပဒေနဲ့ အညီ အမှန်တရားအတိုင်းအပြစ်ပေးစေချင်တာပါလို့ ပြန်ပြောလိုက်တယ်တဲ့။ နောက်တော့အဲဒီ မြို့နယ်တရားသူကြီး က စွဲချက်တင်သင့်၊မတင်သင့်အမိန့်ကို ဘယ်လို ကောက်ချက်ချသလဲဆိုတော့၊ နှစ်ယောက်သားချစ်သူဘာဝဖက်လှဲတကင်း ရိုက်ထားတဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုရိုးရိုး သားသားခင်မင်မှုပုံစံတဲ့ (ဟုတ်၊မဟုတ်စဉ်းစားလို့ရအောင် ဓါတ်ပုံတွေပါ ကြိုးစားရှာပြီးတင်ထားတယ်)၊ ဟိုတယ်မှာ နှစ်ယောက်အတူ တစ်ခန်းတည်း၊ နေတာကို တွေ့တဲ့လူသက်သေ ကိုလည်း၊ တစ်ခန်းတည်း နေတာကိုတွေ့တာဘဲရှိတာတဲ့၊ sexual လုပ်တာကို တွေ့တာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။(ချစ်သူတွေ၊ စိတ်မထိန်း နိုင်လို့ အတူနေမယ်ဆိုရင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို Live Show ပြထားရမယ်ထင်တယ်နော်)။ အဆိုးဆုံးက မရိုသေ့စကား၊ ဇော်ဝင်းရှိန် ရဲ့ ဖွားဖက်တော် က အမှတ်အသားကို ပြောတာကိုလည်း၊ ထည့်သွင်း မသုံးသပ်ဘူး။ (ကြည့်ရတာ ဇော်ဝင်းရှိန် က လူတကာကို သူ့ဖွားဖက်တော် လှန်ပြနေကျထင်တယ်။) နောက်ဆုံးမှာတော့ မြို့နယ်တရားရုံး က စွဲချက်မတင်သင့်ဆိုပြီး၊ကောက်ချက်ချသွားတယ်လေ။ အခု ပန်းဖြူ ကခရိုင်အဆင့်၊ တိုင်းအဆင့်၊ ဗဟိုအဆင့်ဆင့်တတ်ဖို့ လုပ်နေတယ်တဲ့။ တရားဥပဒေဆိုတာ အမှန်တရားဘက်ကနေ အမြဲရပ်တည်တယ်ဆိုတဲ့ ၊ယုံကြည်မှု့ တွေရှိနေသေးတယ်တဲ့လေ။အဲဒီတော့ တရားဥပဒေက အမှန်တရားဘက်မှာရှိသလား။ အာဏာရှင်၊ငွေရှင်တွေဆီမှာရှိသလားဆိုတာ ထပ်ရလာမဲ့ သတင်းတွေကို ဆက်လက်ဖေါ်ပြပေးမှာဖြစ်သလိ၊ု ဇော်ဝင်းရှိန်ရဲု့ပေးကမ်းရက်ရောမှု့ တွေကိုလည်း တစ်ပေါင်းတည်းပြောပြမယ်နော်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ ဒီသတင်းကြားပြီးတဲ့အခါမှာ တစ်ခုဘဲ၊ အကြံ ပြုချင်တယ်။ ဒီလို တရားရေးကို လုပ်ချင်တိုင်း၊လုပ်ခွင့်ရနေမယ်ဆိုရင် “တရားရုံးတွေကို ဓါတ်ဆီဆိုင် တွေလိုပဲ ပုပ္ပလိကပြောင်းပေးလိုက်သင့်ပြီ” ဟုအကြံပေးလိုက်ချင်ပါတော့တယ်။ ငွေမက်တဲ့မိန်းခလေးတွေ သင်ခန်းစာယူစရာပါပဲ ၊ ပိုက်ဆံဒီလောက်ရှိပြီး ကိုယ့်ကိုကိုယ် သ နေနိုင်တာတောင် ဒီရုပ်ထွက်နေတဲ့ကောင်ကို ဘာကြည့်ကြိုက်တာလဲ ရှင်းနေတာပဲ။
ဒီကိစ္စသာတကယ်မှန်လို့ ကတော့ အမျိူးသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ကူကယ်ရာမဲ့ဖြစ်နေတာပါပဲ ။မိအေးနှစ်ခါနာတာထက်ကိုဆိုးနေပါတယ်။ သူ့ ကိုယ်ေ၇းကိုယ်တာကိစ္စမှန်ပေမယ်လို့ ရုံးမှာအမှုကြိတ်ဖြစ်နေတာမျိူးမပာုတ်ပဲ လူအများသိခဲ့လို့ ရှိရင် ရလဒ်ပြောင်းများပြောင်းလာနိုင်မလားဆိုတဲ့ အမျိူးသမီးချင်းစာနာစိတ်နဲ့ဒီမှာတင်ဖြစ်ပါတယ်။ မေးလ်မှာဓါတ်ပုံတွေလည်းပါပါတယ်။ စာမှာပါခဲ့သလိုပဲ နှစ်ဦးသဘောတူနေခဲ့ကြတဲ့အနေအထားတွေကိုမှ အထောက်အထားအဖြစ်နဲ့ တင်ပြနိုင်ရမယ်ဆိုတာကတော့ မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကတော့ ဆန့် ကျင်ဘက်အမျိူးသား အမျိူးသမီးနှစ်ယောက်ရဲ့ ပက်သတ်မှုကိုခန့် မှန်းလို့ ရတဲ့ပုံမျိူးပါ။ ခရီးသွားစဉ်နှစ်ယောက်တွဲရိုက်ထားတာမျိူး ။ ခုံတစ်ခုံတည်းမှာနှစ်ယောက်တွဲထိုင်နေတာမျိူး ပခုံးဖက်ထားတာမျိူး ကိုဆိုလိုပါတယ်။
တရားရုံးတွေကော၊ ရဲစခန်းတွေကော၊ ယာဉ်ထိန်းတွေပါ ပုဂ္ဂလိက ပြောင်းပြစ်သင့်တာပါ။
ပုဂ္ဂလိက ဟီးဟီး.. အကုန် အဲလို ဖြစ်ကုန်ရင် ဈေးကွက် စီးပွားရေး စနစ် ဈေးပြိုင်စနစ် အဲလိုတွေ ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့.. တချို့ဟာတွေကတော့ ထားသင့်တာ ထားရမယ်လေ.. သေချာလည်း ပြန်စဉ်းစားကြပါအုန်း
ဘကတော့လေ နှစ်ယောက်လုံးကို ခွေးသား နဲ့ မျောက်မ လို့ ဘဲပြောလိုက်တော့မယ် ၊
မယ်တော်ကြီး အခေါ်ခံရသူနှင့် …..သမီးတော်များပါ ……ပုဂ္ဂလိကသို့ ……လွှဲပြောင်းသင့်ပါကြောင်း ……
အင်း ဒါမျိုးတွေသတိထားသင့်တယ်ဗျ…ကြာရင်မကောင်းဘူးဖြစ်လာမယ်….မြန်မာနိုင်ငံနာမည်ပျက်နေတာ အတော်ကြာပြီ….
သနားလိုက်တာ ပန်းဖြူလေးရယ် ….. ကံကောင်ပါစေ …. အမှုနိုင်ပြီး ဇော်ဝင်းရှိန်ဆိုတဲ့ကောင်ကို ကြိုးပေးသတ်ပါ့စေ ….. ပန်းဖြူလိုစိတ်ဓာက်မျိုး အမျိုးသမီးတိုင်းမှာ ရှိသင့်တယ် … ရှက်လို့ကတော့ ခံရမှာပဲလေ ….. မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှက်လို့မတိုင်တဲ့ အမှုတွေ နည်းမှမနည်းပဲ …. ကောင်းတယ် .. အားပေးပါတယ် …
တို့အထင် ဒီသတင်းက အပြင်မှာသိပ်မပေါက်ဘူးနော်၊ လုံနေတယ်
ဒီတစ်ခုမှ မဟုတ်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အမှန်တရားဘက်က အသာမရတာတွေ အရင်ကလဲ ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဘာပဲပြောပြော ကံကောင်းပါစေပဲ ဆုတောင်းပေးရမှာပေါ့ဗျာ…
ငွေရှိတဲ့ သူဘဲ ဖြစ်ဖြစ် မရှိတဲ့သူဘဲ ဖြစ်ဖြစ် ယုတ်မာတဲ့သူက ယုတ်မာတာပါဘဲ
ခုတောင် အမှုဖွင့် ၅၀၀၀၀ အမှုပိတ် ၅၀၀၀၀ ပေးနေရတာ..
အမှုဖွင့် သိန်း ၅၀ အမှုပိတ် သိန်း ၅၀ဖြစ်ကုန်မယ်ထင်တယ်
ပန်းဖြူအတွက်စိတ်မကောင်းတာတော့..စိတ်မကောင်းတာပါပဲ.. အဲဒါထက်ပိုစိတ်မကောင်းရတာက… တရားသူကြီးတွေ ဒီလိုဖြစ်နေမှတော့ ပန်းဖြူထက်နစ်နာမယ့်လူတွေ ဘယ်လောက်တောင်များနေမလဲစဉ်းစားမိလို့ ပါ… တစ်ကယ်တော့တရားသူကြီးတွေဆိုတာထက်.. မတရားသူကြီးတွေပါပဲ…
“ဟိုတယ်မှာ နှစ်ယောက်အတူ တစ်ခန်းတည်း၊ နေတာကို တွေ့တဲ့လူသက်သေ ကိုလည်း၊ တစ်ခန်းတည်း နေတာကိုတွေ့တာဘဲရှိတာတဲ့၊ sexual လုပ်တာကို တွေ့တာ မဟုတ်ဘူးတဲ့။(ချစ်သူတွေ၊ စိတ်မထိန်း နိုင်လို့ အတူနေမယ်ဆိုရင်၊ ပတ်ဝန်းကျင်ကို Live Show ပြထားရမယ်ထင်တယ်နော်)။ အဆိုးဆုံးက မရိုသေ့စကား၊ ဇော်ဝင်းရှိန် ရဲ့ ဖွားဖက်တော် က အမှတ်အသားကို ပြောတာကိုလည်း၊ ထည့်သွင်း မသုံးသပ်ဘူး။ (ကြည့်ရတာ ဇော်ဝင်းရှိန် က လူတကာကို သူ့ဖွားဖက်တော် လှန်ပြနေကျထင်တယ်။) ”
ဒီလောက်တောင်မှ မိုက်ရိုင်းတဲ့ကောင်မျိုးတွေကို ငယ်ပါကိုသင်းကွပ်လိုက်ရမယ်
ကိုယ်ကြားတာဒီသတင်းကပန်းဖြူကကျေအေးလိုက်တယ်လို.။ အဲဒီငနဲလည်းတရားသူကြီးတွေကိုလာဘ်ပေးရတာမနဲဘူးတဲ့။ ပြီးတော့သူကကောင်မလေးတယောက်နဲ့
မဂ`်လာဆောင်သွားပြီမှုတ်လား၊ ယူတဲ့မိန်းမကလည်းရှိသေးတယ်။ ဖြစ်ချင်တိုင်းကိုဖြစ်နေတာဘဲ။
ဖြစ်သမျှအကြောင်း ကောင်းသလား ဆိုးသလား မသိတော့ပါ ၊
ငွေသည် လူ့ သည်းခြေကြိုက် ဖြစ်လေတော့ မည်သူ့တွင် အပစ်ရှိပါသနည်း ဆိုရသော် လွန်စွာပင်ခက်လှ
ယခု ဇတ်လမ်းအမှန်တစ်ကယ် ဟုတ်ခဲ့ပါက ပန်းနုမှာ သနားစရာ အတိဖြစ်ပြီး . ဟိုကောင် နှာရူး ဇော်ဝင်း
ရှိန် အားထိုက်တန်သော အပစ်ပေးသင့်ပါကြောင်း…
ဗုဒ္ဓေါမြတ်စွာဘုရား … ပန်းဖြူက ဟိုဘုရားလူကြီးရဲ့ အငယ်လေ။ တကယ်မသိကြတာလား။